U-Atul Gupta ongenamahloni uhambisa uhulumeni enkantolo ukuze kuvuselelwe iphasiphothi yaseNingizimu Afrika | Scrolla Izindaba
U-Atul Gupta ongenamahloni uhambisa uhulumeni enkantolo ukuze kuvuselelwe iphasiphothi yaseNingizimu Afrika
UGupta, oneminyaka engama-52, umangalela uMqondisi-Jikelele woMnyango Wezasekhaya ngokwehluleka “ukwenza ngokungekho emthethweni” kokumnika iphasiphothi entsha yaseNingizimu Afrika.
U-Atul, ongomunye wabazalwane bomndeni wakwaGupta abasolwa ngenkohlakalo esikhungweni sokulawulwa kombuso, uthi kumele athole iphasiphothi entsha yaseNingizimu Afrika.
Iningi lomndeni selifudukele e-Dubai futhi linqabile ukubuyela kuleli ukuzophendula imibuzo kwikhomishini kaZondo.
UNgqongqoshe Wezasekhaya u-Aaron Motsoaledi waveza obala ukuthi izicelo ezimbili zamaphasiphothi ezivela kwabakwaGupta bezivalelwe endaweni ephephile.
“Lokhu kusho ukuthi uMotsoaledi wayephula imisebenzi yakhe yoMthethosisekelo,” kusho uGupta ngesikhathi efaka isicelo eNkantolo eNkulu yase-North Gauteng e-Pitoli, eyafakwa ngoMasingana.
UMotsoaledi utshele i-eNCA ngowezi-2019: “Ngingaqinisekisa ukuthi kunezicelo ezimbili ezivela kumalungu omndeni wakwaGupta. Angicabangi ukuthi sizozicubungula ngoba kusenezinkinga eziningi ezisasele nabakwaGupta.”
Noma nje iNingizimu Afrika izama ukukhipha lo mndeni owawunempikiswano ovela e-United Arab Emirates (UAE), u-Atul Gupta ngokungenamahloni ufuna iphasiphothi entsha ngoba leli elakhe lamanje liphelelwa ngamakhasi.
“Empeleni, isicelo Sami besithi kukhishwe incwajana entsha ngoba sengivele nginephasiphothi evumelekile ezosebenza kuze kube ngowezi-2025 futhi ngafaka isicelo sephasiphothi entsha ngoba amakhasi ephasiphothi esebenzayo ayesephela,” kusho uGupta.
Kuleli sonto uMvikeli woMphakathi osabambile ummeli uKholeka Gcaleka umemezele ukuthi lowo owayenguNgqongqoshe Wezasekhaya uMalusi Gigaba wayengenacala ngokunikeza abakwaGupta ilungelo lokwenza umsebenzi ngesikhathi befaka izicelo zamaphasiphothi abo aseNingizimu Afrika.
Umthombo wesithombe: @AtulNaai